Waxtarka dabaasha Maxay dabaasha u fiicantahay? | Ragga Stylish
Xaqiiqdii hadda xagaaga ayaa imanaya waxaad jeceshahay inaad ku qabowdo xeebta ama barkadda. Daqiiqadahaani waa kuwa ugu fiican ee lagu tababbari karo isboorti kaa caawinaya inaad caafimaad qabtid oo aad lumiso kiiladaas dheeriga ah. Mid ka mid ah cayaarahaan la xiriira biyaha ayaa ah dabaasha. Waa ciyaar gaar ah maadaama ay tahay mid shaqsi ah isla markaana lagu dhaqmi karo nolosha oo dhan. Waxaan u wajihi karnaa ciyaartan siyaabo badan. Laga bilaabo waxqabad si aad u dhaqaaqdo oo aad u gubto kalooriyada, illaa tartanka, nasashada ama xoojinta muruqyada ku lug leh.
Maaddaama cayaartani ay aad ugu fiican tahay caafimaadkaaga, qoraalkan waxaan diiradda saari doonnaa sharraxaadda Waxtarka dabaasha
1 Dabaasha cayaar ahaan
2 Ujeeddooyinka ugu waaweyn
3 Faa'iidooyinka dabaasha cayaar ahaan
4 Faa'iidooyinka caafimaad ee dabaasha
Dabaasha cayaar ahaan
Markaan ka hadlayno dabaasha, waxaan ula jeednaa nooc isboorti ah oo lagu dhaqmi karo laga bilaabo markaan nahay bilo yar illaa aan ka gaareyno 80 sano ama xitaa ka weyn. Awoodaan dabaalanku waxay noo ogolaaneysaa inaan ku dhaqaaqno biyaha iyadoo ay ugu wacan tahay dhaqdhaqaaqyo qiiro leh oo taxane ah oo aan ku qabanno muruqyada qaarkood oo ku lug leh. Dhaqdhaqaaqyadan qaafiyadda ah ayaa gebi ahaanba la isku duway si liidata iyo ka sarreeya. Jidhku wuxuu noo suurta gelinayaa inaan ku sii nagaano biyaha dushiisa si looga adkaado iska caabinta ay na siiso.
Samaynta isboorti sida dabaasha waxay tusineysaa adeegsiga farsamada si dhaqdhaqaaqyadan loogu bixiyo qaab ku habboon. Intaas waxaa sii dheer, inta lagu jiro dabaasha waxaan hagaajineynaa xawaareheena iyo adkeysigeena labadaba. Jidhkeena looma qorsheynin inuu dabaasho, markaa waa inaan sameynaa dhaqdhaqaaqyo aan dabiici ahayn oo aad u dareen yar. Faa'iidada dhaqdhaqaaqyadan ayaa ah in dheefaha caafimaad ee kaladuwan la helo sida aan gadaal ka arki doonno.
Ujeeddooyinka ugu waaweyn
Ujeeddooyinka ugu waaweyn ee lagu dabaasho dabaal ahaan isboorti waxay tixgelinayaan shuruudaha kale ee gaarka ah sida anshax kale oo isboorti oo kale ah ma laha. Tusaale ahaan, xiiqda, haweenka uurka leh, suuxdinta iyo dadka qaar ee la ildaran xoogaa dhimista jireed ama maskaxeed ayaa lagu doorbidi karaa dhaqanka dabaasha.
Himilooyinka dabaasha waa kala duwan yihiin. Mid ka mid ah waa habka adeegsiga. Taasi waa, daboolida baahiyaha aadanaha sida badbaadinta nolosha. Haddii aan ka soo dhacno doon ama markab inta lagu jiro burburka markabka, ogaanshaha sida loo dabaasho waa lama huraan haddii aan dooneyno inaan badbaadino nolosheena. Nooc kale oo ah ujeeddooyin isboorti oo dheeri ah ayaa ah ujeeddooyinkaas waxbarasho.
Ujeeddooyinka waxbarashadu waa kuwa, marka laga reebo barashada barashada dabaasha, siin kara tababar dhammaystiran qofka ka socda mootada, aragtiyaha quseeya iyo garashada.
Ujeeddada kale waxay noqonaysaa habka nadaafadda iyo nadaafadda. Horumarinta xaaladda jireed ayaa sidoo kale la socota. Ujeeddooyinkaan waxaa lagu dari karaa habab tartan iyo madadaalo labadaba.
Faa'iidooyinka dabaasha cayaar ahaan
Marka aan falanqeyno ujeedooyinka dabaasha sida isboorti, waxaan falanqeyneynaa waxa ay tahay faa'iidooyinka dabaasha.
Faa'iidada ugu horeysa waa soo saarista saameyn hoose oo ku saabsan lafaha iyo kala-goysyada markaan sameyneyno. Si ka duwan cayaaraha kale sida orodka, waxaan isku aragnaa isboorti saameyn yar. Markii aan quusinno jirkeena biyaha si aan u dabaalanno, waxaan ogaaneynaa inuu miisaankiisu ka yar yahay, maadaama aan dul sabeyneyno. Tani waxay naga dhigeysaa inaanan saameyn toos ah ku yeelan karin asfaltiga ama ciilka jilibka markaan dhulka ku tiirsaneyno. Sidan oo kale, waxaan hubineynaa in kala-goysyada aysan duugoobayn oo si fiican loo ilaalin karo.
Marka aan dabaalaneyno, waxaan leenahay dabacsanaan iyo dabacsanaan weyn. Inta badan kooxaha muruqyada ee jirkeena waxaa loo isticmaalaa dabaasha. Labadaba jirka sare iyo kan hoose, jirridda iyo madaxa. Sidan oo kale, waxaan ku guuleysaneynaa in kala-goysyadu ay yihiin kuwo jilicsan oo murqaha la xoqin karo lana xoojin karo. SIsku soo wada duuboo, muruqyada dhabarku xoog ayey u xoogaystaan.
Faa'iidooyinkaan waxay dabaasha ka dhigayaan isboorti si weyn loogu taliyay dadka leh hernias, xanuunka dhabarka oo hooseeya ama dhibaatooyin sinta ah oo kala duwan. Faa'iidada kale waa dufanka gubanaya. Dabaasha waxay ku lug leedahay dhaqdhaqaaqa jirka oo dhan iyo waxqabadka muruqyada. Waxay kuxirantahay culeyskaaga, da'daada iyo awooda aad ku dabaalanayso, waxaad gubi kartaa inta udhaxeysa 500 ilaa 700 kcal saacadii dabaasha. Haddii aad bilaabayso inaad lumiso miisaanka, tani waa fursaddaada.
Faa'iidooyinka caafimaad ee dabaasha
Haatan waxaan arki doonnaa faa iidooyinka tooska ah ee ay dabaashu ku leedahay caafimaadka. Kan dabaasha joogtada ah wuxuu la dagaalami karaa cudurada qaarkood ee raaga sida neefta, kolestaroolka iyo sonkorowga. Waa jimicsi jimicsi oo, xitaa haddii ay xoog leedahay, ku dhacdo muddo dheer. Tani waxay caawineysaa hoos u dhigida heerarka kalastarolka dhiigga waxayna ka dhigeysaa mid xasaasi u ah insulin-ta. Sidan oo kale, waxaan ku maarayn karnaa yareynta heerarka gulukoosta dhiigga.
Waxay hagaajisaa nidaamka neefsashada iyo awoodda sanbabada. Adiga oo si joogto ah u adkeyneyna iska caabinta dabaasha, waxaan awoodnaa inaan horumarino awooddeena neefsashada. Intaas waxaa sii dheer, dabaasha ayaa sidoo kale quusinaysa mid biyaha hoostooda isla markaan daallan nahay, sidaa darteed waxaan kordhinaa awooda sambabkeena.
Faa'iidooyinka neerfaha iyo garashada waxay dhacaan markay dabbaalanayaan maxaa yeelay waxaan dhaqaajineynaa labada qaybood ee maskaxda. Intaa waxaa dheer, dhammaan afarta xayndaab ayaa sidoo kale la hawlgeliyay. Tani waxay keenaysaa inay jiraan isku xirnaan badan oo neerfaha ah oo waxaa jira firfircooni ballaaran oo maskaxda marka ay hesho oksijiin badan.
Si la mid ah faa'iidadii hore, waxaa jira horumarin ku saabsan nidaamka wadnaha. Waxay hagaajinaysaa isticmaalka oksijiinta 10% wadnuhuna wuxuu soo saari karaa dhiig dhan 18%. Tani waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta wareegga, iyadoo hoos u dhigeysa garaaca wadnahaaga adigoo dhiig badan ku ridaya garaacis kasta. Jimicsiyada neefsashada waxay ku lug leeyihiin dulqaad kordhin.
Ugu dambeyntiina, waa mid xiiso leh in la sheego in ay sidoo kale leedahay faa'iidooyin nafsaani ah. Markaan isku dhexgalno biyaha oo aan xoogga saarno neefsashada, jirkeennu wuu nasanayaa, dareenka walaaca ayaa yaraanaya. Dad badan, waxay ka caawisaa hagaajinta calaamadaha niyadjabka. Siideynta endorfin-ka ayaa muhiim u ah jirka si uu ugu dareemo wanaag. Sidan ayaan ku sii deyn karnaa xiisadaha na haysta waxaanan baran karnaa inaan ku faraxsanahay.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan kaga baran karto waxtarka dabaasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Faa'iidooyinka dabaasha